Kenià/Somalia: Ady Ao Amin’ny Twitter Ifanandrinan’ny Tafika Keniana Sy Ny Al Shabaab · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Janoary 2012 9:04 GMT
Nivadika ady tao amin'ny Twitter ny fanafihan'ny miaramila Keniana tao Somalia ireo vondrona mpitolona Al Shabaab antsoina hoe “Tetikady Linda Nchi” “Operation Linda Nchi” (Swahili “Tetikady ho Fiarovana ny Firenena”). Tonga izany ady izany noho ny famoahan'ny mpitondratenin'ny miaramila Major E ChirChir sary taloha be tao amin'ny Twitter @MajorEChirchir, sary ntaolo milaza fa nisy Keniana niditra tao amin'ny Al Shabaab notorahan'ny mpikambana tao vato noho ny “hevitra tsy mitovy”. Sary efa nofafana fa azo jerena ato
Nipoitra taty aoriana fa mpanao gazety Somaliana tokoa no naka izany sary izany tamin'ny taona 2009 ary tsy mba nanana sarina Kenyana ao amin'ny Al Shabab akory. Nampiseho fandraisan'andraikitra avy hatrany ny mpitondra tenin'ny tafika Kenyana izay niaiky fa tompon'andraikitra amin'izay lazainy ary nanambara toy izao tamin'ny tweet iray hoe:
Sary famantarana manokana ofisialy an'ny tafika Kenyana. Sary avy amin'ny: @MajorEChirchir.
@MajorEChirchir: #PicturePosting Andraikitro ny fandefasana sary taloha be, tamin'ny talata no nanatanterahana ny famonoana. Amin'ny Zoma mety mbola hisy.
Namaly ny tweet-ny @MajorEChirchir, @SelfMadeAbdi nanontany hoe:
@SelfMadeAbdi: Tokony hatoky anao ve izahay?
@Dannmanufc nanoratra hoe:
@Dannmanufc: tsy matoky intsony ny vaovao alefanao
@kithembe nilaza hoe:
@kithembe: @MajorEChirchir mampalahelo izany #PicturePosting fa ajanony ny fandefasana sary taloha be.
Sary tamin'ny tweet-ny @MajorEChirchir. Sary avy amin'ny: globalpost.com
Niteraka fahatezerana teo amin'ireo mpisera Twitter nampiseho ny hatezerany, ny ahiahiny ary ny heviny mikasika ny raharaha tamin'ny alalan'ny tenifototra #PicturePosting ilay hafatra tweet. Mpisera Twitter @mamayaimani nanoratra hoe:
@MajorEChirchir #PicturePosting tsy maintsy fantatrao ny fiantraikan'izao aminao [finoana ny lazainao] sa ahoana? Fantatrao ny dikany eo amin'ny ankilany?
Mpisera Twitter @geoffreyork nanohana @MajorEChirchir ka nilaza hoe:
@geoffreyork: Ity sary tamin'ny taona 2009 avy amin'ny gazety Britanika: http://bit.ly/yDYRn4 Ampitahao amin'ny sary tweet nalefan'ny Major. Mitovy.
Pejy Twitter an'ny Harakat Al-Shabaab Al Mujahideen, @HMSpress, namazivazy kely ny Mpitandro ny Filaminana ao Kenya hoe:
@HMSpress: Ho an'ireo izay liana: tamin'ny taona 2009 no nitranga ny raharaha, tsy #Kenyana ilay lehilahy, tsy tao Kismayo izany, ary tsy HSM http://www.dhanbaal.com/main/index.php?module=News&func=display&sid=272
@HMSpress: Somary tsy dia be filirony loatra izy ireo, na dia tamin'ny fampielezan-kevitra aza. Fikarohana tsotra ao amin'ny Google dia mety ahavonjy izao fahasahiranana izao.
Kenyana sy olona liana hafa no namaly izany olana rehetra izany, ity sombiny tamin'ny tweet nalefan'izy ireo:
Mpamaham-bolongana teknisiana @RobertAlai nilaza hoe:
@RobertAlai: @MajorEChirchir miandry ny valinteny avy aminao izahay. Mitady hamitaka anay ianao. Mila mahafantatra ny zava-misy marina izahay fa tsy zava-noforonina
Okwaroh naneho hevitra hoe:
@Okwaroh: @MajorEChirchir hatraiza no tokony handeferanay ny ‘fanadinoanao’. Mampametram-panontaniana marobe ny fahazoa-mitoky ny TENINAO
Fanehoan-kevitra momba ilay sary diso toerana, mpisera Twitter Kenyana iray @Jkisioh, nampiasa fiteny hafakely “Twicide” ary nanontany hoe:
@JKisioh: nanao twicide ve @MajorEChirchir ?
Nihevitra angamba ilay mpitondratenin'ny tafika Kenyana mihinana amam-bolony izay lazaina aminy ny mpiserasera ka hino izay lazainy ho toy ny teny masina. Tsy ny Al Shabaab sy ny mpanohana azy ihany no nanakiana izay mety ho fahamarinan'ny zavatra nolazainy ireo fa ny mpiserasera Kenyana toy ny “Adin'ny Tweet” ary mbola mitohy ny ady am-balantserasera.
Tao an-drenivohitr'i Kenya, Nairobi, tamin'ny herintaona dia nahitana fanafihana amin'ny grenady roa izay misy ifandraisany amin'ny Al Shabaab: ny iray tao amin'ny trano fialam-boly malaza ary ny iray teo amin'ny toerana fiantsonan'ny fiara mpitatitra be olona ao afovoan'i Nairobi.